Baaq ka soo baxay Isimada Gobolka Bari
Baaq ka soo baxay: Waxgaradka, Aqoonyahanadda, iyo Siyaasiyiinta Puntland,
OGADEN AMERICAN COMMUNITY: Baaq canbaareyn ku wajahan Maamulka Punland
Burcad Badeed iyo Burcad Beri lagu xukmay Puntland.
2. Waxan ugu baaqeynaa maamulka Puntland in wixii faldenbiyeed ah ee ka dhaca Puntland ay la falgalaan hey�adaha amniga ee qaabilsan, lana mariyo hey�adaha garsoorka ee u xilsaaran si dadka u dhdashay iyo dadka deggan ay u dareemaan caddaalad.
5. Waxaan ugu baaqaynaa hay�adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee ka howlgala degaanka Puntland in ay dhacdadaas dabagal ku sameeyaan si raggaas loogu soo celiyo xornimadooda.
OGADEN AMERICAN COMMUNITY
Baaq canbaareyn ku wajahan Maamulka Punland
Apr 28, 2008 Maxkamad Mulateri oo ka dhacday Xabsiga Magaalada Boosaso ayaa la horkeenay Burcad badeed gaaraya 7qof kuwasoo Dooni Ganacsi oo ku socotay Dekedda Boosaso afduubi lahaa balse Ciidamo ka tirsan Puntland ay ka soo badbaadiyeen.
Maxkamada Mulateri ee ka dhacday Xabsiga dhexdiisa ayaa sidoo kale la horkeenay 4 dhalinyaro ah oo ku fashilmay afduub ay u geysan lahayeen Gabar u shaqeysa Hay'adda UNHCR oo u dhalatay Dalka Usteria balse ay iska difaceen ciidamo ilaalo u ahaa UNHCR.
Garsoorayaasha Maxkamada oo dhegeysaty Eedaynta Xeer ilaalinta labo maalin ka hoe ayaa maanta markii ay dhegeysteen markale waxay ugu danbeyntii go'aamiyeen in lagu xukumo buracdaasi xabsiyo kala duwan sida.
7 Burcad Badeed ah ayaa lagu xukumay dhamaantood Xabsi Daa'in kadib markii uu ku cadaaday denbigii lagu soo eedeyay.
4 dhalinyaro Burcad Beri ah oo ku fashilmay afduubka Gabadha u shaqeysa UNHCR ayaa lagu xukumay mid kasta 5 sano oo xarig ah.
Dhalinyarada 5 sano lagu xukumay ayaa Maxkamdu ay u tixgelisay qirashada denbiga iyo iyaga oo sheegay in la khalday islamarkaasna aysan mar danbe u noqon doonin denbi noocan oo kale ah.
Waa markii ugu horeysay oo Puntland ay Maxkamad keento Burcad ay soo qabatay islamarkaasna la xukumo.